शेयर बजारमा मच्चियो हलचल लगानीकर्ताहरु तनावमा | Ekhabar Nepal
अर्थ चैत्र १२ २०७४ ekhabarnepal
सोमबार शेयर बजारमा खुलेदेखि नै आएका गिरावटका कारण हलचल मच्चिएको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि तलमाथि भएर नभई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बोलेकै कारण सोमवारको शेयर बजारमा हलचल मच्चिएको हो । शेयर बजारमा हलचल मच्चिएसँगै शेयर लगानीकर्ताहरु भने तनावमा परेका छन् ।
सोमबार विहानैदेखि घट्न सुरु गरेको शेयर बजार तीन प्रतिशतभन्दा बढिले घट्दा लागेको सर्किट ब्रेकले समेत काम गर्न सकेन । जसबाट लगानीकर्ताहरु निराश बन्न पुगेका छन् । बजार खुलेको एक घन्टा नपुग्दै ३ प्रतिशतले घटेपछि सर्किट ब्रेकर लगाइएको थियो । खुलेको एक घन्टा भित्र ३ प्रतिशतले घटेमा वा बढेमा बजार १५ मिनेटका लागि कारोबार रोक्ने नियम छ । १५ मिनेट सर्किट ब्रेकर लागेको बजार फेरि खुलेपछि पनि बजारको अवस्था लगातार ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताहरुले पीडा महसुस गरिरहेका छन् ।
अपरान्ह २ बजेको समयमा ४३ अंक भन्दा बढीले ओरालो लागेको सेयर बजारको नेप्से ११७७ मा झरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विराटनगरमा आइतबार सेयर बजार घट्नुको कारणबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि बजारमा नकारात्मक असर परेको हो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा हचुवाको भरमा र लहडका भरमा सेयरमा लगानी नगर्न सर्वसाधरणलाई आग्रह गरेका थिए । उनले अस्वभाविक रुपमा बढाइएको बजार अहिले सेयरको बढी आपूर्ति भएका कारण घट्नु अनौठो विषय नभएको स्पष्ट गर्दै कम्पनीको प्रोफाइल हेरेर मात्रै लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए ।